फेसबुक साथीको सहयोगमा पतिको हत्या, यसरी पर्दाफास भयो अपराध, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
फेसबुक साथीको सहयोगमा पतिको हत्या, यसरी पर्दाफास भयो अपराध
एजेन्सी । भारतको नागपुरमा एक महिलाले प्रेमीको सहयोगमा आफ्ना पतिको निर्मम हत्या गरेको खुलासा भएको छ । यतिमात्र होइन यस हत्यालाई आत्महत्या बनाउने प्रयास पनि गरियो । तर प्रहरीको अनुसन्धानमा मामिला पुरा खुलासा भयो । हत्याको रहस्य पत्ता लगाएपछि प्रह्रीले प्रेमी र ती महिलालाई पक्राउ गरेको छ ।
हत्याको यो सनसनीखेज घटना नागपुरको नामदेव गार्डेनको हो । जहाँ प्रहरीले सूचनाका आधारमा एक २६ वर्षीय युवकको शव बरामद गरेको थियो । मृतकको नाम शेखर पौणिकार हो । प्रहरीले शवको जाँचमा सिरमा गहिरो चोट लागेको फेला पारेको थियो । साथै हातका नसा पनि काटिएका थिए ।
शवको सनाखत भएपछि एक २५ वर्षीय महिला प्रहरीमा पुगेर सो शव आफ्ना श्रीमानको भएको बताइन् । उनले गएको राती खाना खाएर घरबाट निस्केको तर, घर नफर्केको भनेर प्रहरीलाई बताइन् । साथै कुनै समस्याले गर्दा गएका दिनहरुमा श्रीमान समस्यामा रहेको र पटक पटक आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेकोसमेत उनले बताइन् ।
प्रहरीलाई उनको कुरामा विश्वास लागेन । प्रहरीलाई उसको बयान कतैबाट पनि सत्य नलागेपछि रश्मी नामकी ती महिलालाई प्रहरीमै राखेर कडा सोधपुछ गरियो । त्यसपछि शेखरको हत्याको खुलासा भयो । उसको हत्या कुनै अरुले होइनकी उनकै श्रीमती रश्मीले आफ्ना प्रेमीको सहयोगमा गरेकी थिइन् ।
प्रहरीका अनुसार ६ वर्ष पहिला शेखरले रश्मीसँग बिहे गरेका थिए । उनीहरुको एक छोरा कुञ्ज (३) पनि छन् । सबै ठिकै चलिरहेको थियो । तर, यसैक्रममा फेसबुकमा रश्मीको मित्रता २१ वर्षीय युवक प्रज्जवलसँग भयो । कुरा मित्रताभन्दा अगाडि बढ्यो । दुबै नजिक भए । दुबै लुकेर भेट्न पनि थाले ।
यता रश्मी र प्रज्जवलको प्रेमज्वाला दन्किरहेको थियो उता शेखर नशामा डुबिरहेका थिए । उसलाई मदिराको नशा लागिसकेको थियो । यसैकारण उसले कैयौं पटक रश्मीलाई पिटेको पनि थियो । प्रायः नशाको तालमा उसले रश्मीलाई पिट्ने गरेको थियो । यसैकारण तनावमा रहेकी रश्मीले शेखरलाई आपनो बाटोबाट हटाउने षडयन्त्र रचिन् ।
यस षडयन्त्रमा उनले प्रेमी प्रज्जवललाई पनि सहभागी गराइन् । योजनाअनुसार मंगलबार राती शेखर नशामा डुबेर घर आएर सुतेपछि तयारी अवस्थामा रहेको प्रज्जवलाई रश्मीले घर बोलाइन् । दुबैले मिलेर शेखरको घाँटी थिचेर उसको हत्या गरिदिए ।
यस निर्मम अपराध यही सकिएन । उसको हत्यापछि दुबैले शेखरको शव बाइकमा राखेर नामदेव गार्डनमा फालिदिए । यसैक्रममा दुबैले एक ब्लेडले शेखरको हातको नसा पनि काटे ।
तर, प्रहरीको अनुसन्धानका अगाडि रश्मीको नाटकले काम गरेन। उनले सबै आरोप स्वीकार गरिन् । प्रहरीले प्रेमी प्रज्जवललाई पनि पक्राउ गरेको छ ।